Mogadishu Journal » 2019 » May » 25
Mjournal :-Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in qarax Miino laga soo saaray dhabarka dambe ee hoyga uu Xildhibaan Cabdi rashiid Xidig ka degan yahay Magaalada Kismaayo oo xarun KMG u ah maamulka Jubbaland. Sida wararku sheegayaan ilaalada Xidig ayaa ku...
Mjournal :-Gudoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee Somaliland Faysal Cali Waraabe oo maanta dib ugu laabtay Magaalada Hargeysa ayaa sheegay in kulamo uu kula qaatay Magaalada Nairobi Siyaasiyiin Soomaaliyeed u jeedka laga lahaana uu ahaa in laga Takhaluso Madaxweyne Farmaajo. Waxaa...
Mjournal :-Wasaarada Arimaha Gudaha XFS oo soo saaratay Mabaadii’da iyo Habraaca guud ee Doorashooyinka Dowlad Goboleedyada
Mjournal :-Xildhibaanada Golaha shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan ansixiyay Sharciga batroolka dalka oo horey u usoo ansixiyeen Golaha Wasiirada Xukuumada Federaalka Soomaaliya. Sharcigan ay ansixiyeen Xildhibaanada golaha Shacabka waxaa ka hor yimid...
Mjournal :-Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa booqasho madaxweyne oo afar maalmood ah oo rasmi ah ku tagay dalka Japan kaasoo badi ku saabsan xaflad iyo sportis, inkastoo mas’uul sare oo ka tirsan Aqalka Cad uu ballan qaadayo “in ay jiri doonto waxyaabo muhiim ah oo lagu...
Mjournal :-Wasiirka Arrimaha Gudaha maamulka Somaliland Maxamed Axmed Kaahin oo warbaahinta kula hadlay Magaalada Hargeysa ayaa sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya uu sameeyay jamhado u hubeysan. Wasiir Kaahin ayaa sheegay in Jamhaddaan loogu tala galay in lagula dagaallamo...
Mjournal :-Xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka (UPD) ayaa soo badhigay mowqifkiisa ku aaddan xaaladda dawlad goboleedka Galmudug, doorashooyinka Jubbaland iyo khilaafka ka dhaxeeya Dowladda Federaalka iyo Dawlad Goboleedyada. Baaq uu soo saaray Xisbiga UPD ayaa lagu sheegay in...
Mjournal :-Caleema-saarka madaxweynaha la doortay ee dalka Koonfur Afrika ,Matamela Cyril Ramaphosa ayaa ka dhacaya magaalada caasimadda ah ee Pretoria ,iyadoo ay xafladda ka qeybgalayaan hoggaamiyeyaal ka socda caalamka. Madax Afrikan ah ayaa ku sugan Pretoria, oo uu ka mid...
Mjournal :-Maxkamada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun dil ah ku riday askari katirsanaa ciidanka booliiska Soomaaliya oo horaantii bishan magaalada Muqdisho ku dilay wiil wade ka ahaa mooto bajaaj. Maxkamada ayaa ku heshay Cali Maxamud Axmed in dil bareer ah 8-dii...